Oxytocin, Fidelity and Sex (၂၀၁၂) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က Porn On
ယောက်ျားတစ်ယောက် oxytocin တက် jacking အားဖြင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်ကိုယ်တော်တိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါသလား?
"တစ်ဦးက လေ့လာမှုထုတ်ဝေအင်္ဂါနေ့ Neuroscience ဂျာနယ်က oxytocin ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး monogamous Relationship မှာအမျိုးသားတွေကပစ္စည်းပစ္စယကိုစုပ်ယူလိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာသူတို့နဲ့သူတို့တွေ့ခါစဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အကြားမှာနေရာပိုနည်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရေးသားခဲ့သည် LA က Times ကမကြာသေးမီက.
အဆိုပါ ရလဒ်တွေကိုသုတေသီများအံ့အားသင့်။ သူတို့က oxytocin စေမယ်လို့ယူဆခဲ့ကြ အားလုံး ယောက်ျားချစ်စရာအမျိုးသမီးပိုမိုနီးကပ်စွာလက်မ။ oxytocin နှင့်အတူ dosed သည့်အခါမယ့်အစားကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ယောက်ျား (ဝေးတဲ့ဝေးပြောင်းရွှေ့ သာ အခါသောက်သောအခါ) ။ ဒါကနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားပါ pair တစုံ-Bond ဇီဝဖြစ်ပါသည် ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပါဘူး။
သို့တိုင်“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟော်မုန်း” သည်လူတို့အားဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ဝတ္ထုမိတ်ဆွေများထံမှအကွာအဝေးကိုမည်သို့မသိရှိအောင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ အဖြေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ပျော်ရွှင်စွာမိတ်လိုက်ချင်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အောက်စီတိုကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာဘယ်လိုထားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားမီ၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အမြစ်များနှင့်စုံတွဲတွဲဆက်ခြင်း၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခြေခံများကိုအတိုချုပ်သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ သူတို့ကအဖြေအပေါ်ခံ။
ကျွမ်းကျင်သူများကကြောင်း pair တစုံဘွန်း (နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်သာ 3-5%) ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမွေးကင်းစကလေး-စောင့်ရှောက်သူများနှောင်ကြိုးနောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြောင်းအတူတူယန္တရားများကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲယုံကြည်ပါတယ်။ ပိုမိုပြည့်အဝရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကို, မွေးကင်းစကလေးနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအကြားနှောင်ကြိုး created နှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏, (တရားဝင်ပူးတွဲမှုတွေကိုအဖြစ်လူသိများ) ဘွန်းအပြုအမူတွေကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနှောင်ကြိုး-ပင်မွေးကင်းစကလေးများနှင့်အကြားဖွဲ့စည်းရန်စောင့်ရှောက်သူများ-ကဤအပြုအမူတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်နီးပါးနေ့စဉ်ပေါ်ပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဦးနှောက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး / နို့တိုက်သတ္တဝါ (နှောင်ကြိုး) နဲ့နှစ်သိမ့်တဲ့ရေရှည်တည်တံ့အသင်းအဖွဲ့တက် Wired နိုင်ပါတယ်။ ကကြမ်းတမ်းနို့ဖြတ်သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုကိုနားမှာကျိုးပဲ့ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, or အသစ်ကနှောင်ကြိုးနှင့်အတူအစားထိုးပါကတစ်သက်တာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဟာကငါတို့မိဘတွေ၊ ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုစူးစမ်းဖို့ဘယ်လိုလာရမလဲ၊ ငါတို့ကံကောင်းရင်တောင်ငါတို့အိမ်ထောင်ဖက်ပဲ။
ပူးတွဲမှုတွေကိုပါဝါနောက်ကွယ်မှစက်ပြင်ဦးသေဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအကျွမ်းတဝင်အပြုအမူတွေ (အရေပြားမှအရေပြားကိုထိတွေ့, မျက်လုံးချင်း, ချစ်ခင်ထိတွေ့မှု, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, etc) က amygdala အဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ဖြန့်ချိ oxytocin နှင့် ကအနားယူ. ဤအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသွေးဆောင်မှုလွယ်ကူခြင်းမရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မစည်းနှောင်ပါ။ ကျနော်တို့သတိထားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်များလွန်းသောကြောင့် amygdala ရှိ oxytocin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတသမတ်တည်းလွှမ်းမိုးသည်ဆိုပါစို့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ amygdala ရဲ့အလုပ်ကလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုရင် (ဥပမာအားဖြင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်း) မဟုတ်ရင်ကာကွယ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ပဲ။ သိသာထင်ရှားသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးဘ ၀ များပိုမိုလုံခြုံမှု၊ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချမှုမခံစားရမီကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလိုအပ်သောသက်သာရာရစေရန်နှင့်လက်ရှိဆက်ဆံရေးစိတ်ဖိစီးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ (ပြန်လည်) ပိုမိုအလွယ်တကူတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းသည်ထင်ရှားသည်။
Oxytocin သည်မှန်ကန်သော ဦး နှောက်ပတ်လမ်းများ၌မှန်ကန်သောအဆင့်ရှိရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသူမည်သူမဆိုတို့၏ကာကွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်နှောင်ကြိုးနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားဒြပ်စင်တစ်ခုလည်းရှိသည်။ dopamine စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်သောဆန္ဒ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းတို့သည်ထိုညီမျှခြင်းထဲဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ (တစ်ခဏအတွင်းမှာပဲ။ )
နောက်ကျော oxytocin ရန်။ သကဲ့သို့လည်းနည်းနည်း oxytocin ဒါသိပ်မခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဓာတု oxytocin ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲ မရနှောင်ကြိုးမှ pair တစုံ bonders ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ (ဤဝိရောဓိအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် receptors အမျိုးအစားများ ကြောင်း oxytocin နှင့်ကအစပျိုးလိုက်ခြင်းဟာ neurochemicals, To- မူတည်. ဖြန့်ချိအရေအတွက်အပေါ်သို့ခညျြနှောငျ။ )
oxytocin လည်းသူတို့သားငယ်များ၏နို့တိုက်သတ္တဝါများခုခံကာကွယ်စေနှင့်အပြင်ကလူဆီသို့ရန်လိုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးတခါတရံတခြားသွေလူကြီးများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်။ oxytocin (နှင့်၎င်း၏အနီးကပ်အာရုံကြောဓာတုဝမ်းကွဲ vasopressin) သည်ဤ“ us v ။ them” အပြုအမူ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသောကြောင့် oxytocin ၏ထိတွေ့မှုကြောင့်မိတ်လိုက်သည့်လူသားအထီးကိုမိမိနှင့်မသိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများအကြားတွင်အနည်းငယ်မျှဝေးကွာသွားစေနိုင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
စကားမစပ်, oxytocin စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုသည့်နှာခေါင်းဖြန်းဆေးသစ္စာမြှင့်တင်ရန်အလားအလာလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ လည်ချောင်းနာ, မရည်ရွယ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ oxytocin တိုးချဲ့ကာလကိုကျော်ဦးနှောက်ထဲသို့နှာခေါင်းကိုတက် squirted သောအခါဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။
သော့ချက်အချက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Bond အပြုအမူတွေကို attachment-ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတန်းတူဖြစ်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ခိုင်မာစေရန် oxytocin ့ညာဘက်ငွေပမာဏကိုကယ်နှုတ်တော်မူဟန်ဖြစ်ပါသည်။ Cuddling ကြိုးအဖြစ်မှတ်ပုံတင် (မဟုတ်လျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကများလွန်းတစ်ကိုယ်တော်လိင်စဉ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရသည်) ။
တကယ်တော့တစ်ဦး 5-တိုင်းပြည်လေ့လာမှု လူလတ်ပိုင်းစုံတွဲများ၏ယောက်ျား cuddling / နမ်းဘို့နှစ်ခုလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတစ်ခုသိသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ နှင့် ဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှုကို။ အမျိုးသားများသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုလိင်ထက် ပို၍ တန်ဖိုးထားသည်။ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေက Gerber's မလာခင်နို့စို့သူငယ်များမှမိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့အစားအစာများကိုပျော်မွေ့စွာထုတ်လုပ်တာကနေနမ်းရှုပ်ခြင်းအနှောင်အဖွဲ့ရဲ့အပြုအမူဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သုတေသီများယောက်ျားသတိရှိရှိသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ oxytocin-releasing Bond အပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျးဖွငျ့စုံစမျးနှောငျ့ရှနေတဲ့အကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သော hypothesize ။ တွင် အပြည့်အဝလေ့လာမှု, သုတေသီ, မယား-မြှင့်တင် oxytocin surges ကြောင်းထောက်ပြ
ဆက်လက်၍ အားတက်သရောသုတေသီများကလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သဘာဝအရ oxytocin ထုတ်လွှတ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်“ အထင်ရှားဆုံး” နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ဤနိဂုံးချုပ်သည်ချစ်သူများသည် oxytocin ကိုလှည့်စားလာသောအခါအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်ဟူသောအချက်ကို အခြေခံ၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိချေ။ (ပုံမှာကြွက်စမ်းသပ်မှုမှဖြစ်ပြီးအောက်တိုတိုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်အထိပြသသည်။ )
သို့သျောလညျးအပြည့်အဝသမာဓိရှိနှင့်တကွ, သုတေသီများ oxytocin လွှတ်ပေးရန်မဟုတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု မှီခိုနေသော ထှတျအထိပျအပျေါမှာ:
အချိန်အတွက်မဆိုပေးထားယခုအချိန်တွင်အဆိုပါရိုးရှင်းသောအနီးကပ်ရှိနေခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များ၏ထိတွေ့မှုလည်းလောက်မယ်, (လေ့လာမှုတစ်ခုကိုးကားပြီး အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများတွင်“ နွေးထွေးသောထိတွေ့မှု” သည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ကိုပြသည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်တစ်ခုလုံး အကွာအဝေး of ချစ်ခင်အပြုအမူတွေ (ပူးတွဲမှုတွေကို) သုတေသီအတန်ငယ်ငွိုအသိအမှတ်ပြုသကဲ့သို့, ထိရောက်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ဒါဟာ Tango နှစ်ခုကြာ: oxytocin နှင့် dopamine
လိင်ရိုက်ထည့်ပါ။ oxytocin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ activity- စဉ်အတွင်းမြင့်မားသည်အထွတ်အထိပ်မတိုင်မီရှည်လျားသော။ ထှတျအထိပျပွီးနောကျ, သို့သော်သူကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုလျင်မြန်စွာပယ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ဒီတော့ dopamine ပု, မ အလိုဆန္ဒရဲ့နောက်ကွယ်မှာ neurochemical (prolactin surges ကြောင့် အခြားအ neurochemical အပြောင်းအလဲများ dopamine တားစီး။ dopamine တုန်ခါသွားသည်နှင့်အမျှပေါင်းစည်းရန်တိုက်တွန်းမှုလျော့ကျသွားပြီးသင်၏ "Miss Now Now" သည် Miss Miss Disappear နှင့် ပို၍ တူနိုင်သည်။
ရှင်းပြအတိုင်းဤအချို့ချစ်သူများများအတွက်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည် orgasm မေတ္တာတော်၌တည်သငျသညျကိုသိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်နည်း dopamine နှင့် oxytocin များကိုပိတ်ဆို့ထားပါ။ တိရိစ္ဆာန်များသည်အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်များနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိကြပါ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ pair တလုံးနှောင်ကြိုးသည် dopamine ကိုထုတ်လွှတ်သော ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuit တွင်အချို့သော oxytocin receptors များပိုမိုမြင့်မားသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များယုံကြည်သည်မှာဒီပေါင်းစပ်မှုက pair တစုံကိုဘာကြောင့်အလိုရှိတာလဲဟုရှင်းပြသည် အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ဖက်။
ဒီတော့အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက် oxytocin နှင့် dopamine အတွက်တစ်စက်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တားစီးကြလိမ့်မည်နည်း လေ့လာမှု Co-စာရေးဆရာ Rene Hurlemann မဟုတ်ထင်၏။ သူကပုဂ္ဂလိကပိုင်အထွတ်အထိပ်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ oxytocin ၏ Bond သက်ရောက်မှု oxytocin အသွေးတော်အဆင့်ဆင့်ညွှန်ပြကြောင်းရှည်အကျဉ်းချုပ်ကိုအချိန်ထက်ကြာရှည်စေခြင်းငှါတွေးဆ။ ဒါကဖြစ်ကောင်းမှန်ပေ၏ သူတို့ကလူတခြို့အတွက်အမှန်ပင် may ။
ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဒါပေမယ့် မပါဘဲ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါအောက်တိုတိုကင်နှင့်ဒင်ပမင်တို့၏လျင်မြန်စွာကျဆင်းခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ထို့အပြင်ထိုသို့သောချစ်ခင်မှုသည်အပြုအမူနှင့်နှောင်ကြိုးအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကရေရှည်တည်တံ့နိုင်တဲ့ oxytocin အကျိုးသက်ရောက်မှုကဒီဟာကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့သဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ထင်ပါတယ် karezza ချစ်သူများ ထှတျအထိပျ၏ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲမကြာခဏ, နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအလေးပေးကြောင်းဆက်ဆံရေးအတွက်အစီရင်ခံစာ။
ထို့အပြင် climax ပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းထပ်မံကျသည်းခံသူများအားမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုပင်တားဆီးခြင်းသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ကိုသတိရပါ ဘယ်အချိန်မှာဟယ်ရီ Met လီ? Billy Crystal သုံးဆယ်စက္ကန့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအောင်ပြီးနောက်သူကအမြဲအိပ်ရာထဲက get နဲ့စွန့်ခွာချင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ ဤအကြောင်းကိုမေးသောအခါအခြားသောသူကပြောပါတယ်, "အင်းငါအရှိဆုံးယောက်ျားခံစားရပုံကိုခန့်မှန်း။ '' Boom, ငါပြုတယ်! Elvis အဆောက်အဦးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဆီဥကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သီဆိုခဲ့သည်။ သငျသညျ-နှင့်နှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ' "နှောင်ကြိုးတစ်ဦးအလိုဆန္ဒ၏ခိုင်ခံ့မဟုတ်အထောက်အထား။
ဒီ post-coital အဆင့်တောင်မှသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်စိတ်မဝင်စားလူတခြို့ထားခဲ့နိုင်တယ်သေး အခြားအဆွဘို့အဆာလောင်မွတ်သိပ်။ တစ်ဦးက သဘာဝအ neurochemical သံသရာ ဖြစ်ကောင်းအချို့အတွက်နေ့ရက်ကာလအဘို့ပွောငျးလဲနေသော, အလုပ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည် ယောက်ျား (နှင့် အမြိုးသမီးမြား), နှင့်မသိမသာ homeostasis မပြန်မီအမြင်ပြောင်းလဲ။ တိုတောင်းသောများတွင်အော်ဂဇင် oxytocin တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချမြင့်တက်ထက်ပိုပါတယ်။
ထှတျအထိပျ၏ frequency ကဒီမှာအရေးပါသော variable ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ မက္ကဆီကန် သုတေသီများသည်မကြာသေးမီကပြသ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေ၏ neurochemical သက်ရောက်မှုကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်မှီအထီးတိရိစ္ဆာန်များ (သူတို့လည်းမကြာခဏ ejaculate လျှင်ဖြစ်ပါသည်) ejaculate လျှင်အကြောင်း, ရလဒ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာမျိုးပွားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြှင့်နိုင်ပါ။ ယောက်ျားအကြီးအကျယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောရောက်ရှိပြီးနောက်စတုတ္ထနေ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်မဟုတ်ဘဲနှစ်ယောက်အပြည့်အဝလိင်စိတ်ဖို့ back နေကြတယ် ရက်သတ္တပတ်.
ချစ်ခင်လိင်အမြဲအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော်လည်းပို့ဆောင်နေသည် မ အမြဲတမ်းသာ။ ကြီးမြတ်မေတ္တာနှင့်နှောင်ကြိုး ဦး ဆောင်လမ်းပြ။ အကယ်၍ အထွတ်အထိပ်သည်လူသားများတွင်ပိုမိုခိုင်မြဲသောနှောင်ကြိုးများရရှိရန်သော့ချက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်တွေ့သင့်ပါ နောက်ထပ် အစဉ်အဆက်ယခုတက် hooking သဘာဝအများနှင့်ဒြပ်နည်းလမ်းများမှတဆင့်ယဉ်ကျေးမှုစံများနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အထွတ်အထိပ်အလွယ်တကူမှီကြောင်းထက်ရေရှည်အချစ်သီချင်း?
အခြေအနေကရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထွက်ထိတွေ့, ရင်သားနဲ့အဆက်အသွယ်, နမ်းခြင်း, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, အရေပြား-to-အသားအရေအဆက်အသွယ်: လိင်ဆက်ဆံမှုယေဘုယျအားဖြင့်သံသယမရှိ Bond အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲနေကြသည်အချို့လှုပ်ရှားမှုများပါဝငျ။ အထွတ်အထိပ် (နှင့်အစဉ်အဆက်မဖြစ်စေမ) ရောက်ရှိအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ oxytocin ကိုလွှတ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်အထွတ်အထိပ်အော်ဂဇင်ကိုယ်နှိုက်ကရောထွေးအာရုံကြောဓာတုသတင်းစကားကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယောက်ျားအချို့ကိုအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသွေးဆောင်မှု stupor သို့ပို့သည်။ အမျိုးသားများစွာသည်ထိုအချိန်အတန်ကြာ“ ဂူ” ကိုတပ်မက်ကြသည်။ အချို့ အမြိုးသမီးမြားထိခိုက်နေကြသည် လွန်း။
ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သောစုံတွဲတစ်တွဲသည်ကန ဦး မိတ်လိုက်ခြင်းစိတ်ဓာတ် (ယာယီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော“ ပျားရည်ဆမ်း neurochemicals” ၏ပံ့ပိုးမှု) အပေါ်မူတည်သည်။ မကြာခဏနှစ်သိမ့်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကရေရှည်တည်တံ့တဲ့အနှောင်အဖွဲ့တွေထဲမှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေဟာအများအားဖြင့်အတူတူနေခြင်း၊ လူတွေရဲ့အပြုအမူတွေဟာ flirty လိုပဲတွဲဖက်တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်ဘုံအနှောင်အဖွဲ့တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်အမျိုးမျိုးသောမျောက်ဝံများသည်လက်များခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်ပင်ဖုံးအုပ်ခြင်းတို့တွင်မကြာခဏပါ ၀ င်သည် သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ.
အဓိကအချက် - သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်များစွာကသင်၏ amygdala ကိုသက်သာစေခြင်း၊ သင်၏နှောင်ကြိုးကိုခိုင်မာစေခြင်းသို့မဟုတ်သင်မသိသောအမျိုးသမီးများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းကိုမကူညီပါကသင်နှင့်အတူဂန္တ ၀ င်သောအပြုအမူများ၏ကြိမ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်လိုသည် (နမ်းခြင်း၊ အစားအရေပြားအဆက်အသွယ်) နှင့် flirty အပြုအမူ။
သငျသညျအထူးသဖြင့်ရဲရင့်ခံစားမိလျှင်, ဤနည်းဗျူဟာကိုမကြာခဏချစ်ခင်အတူပေါင်းစပ်စဉ်းစားပါ ထှတျအထိပျ၏ရည်မှန်းချက်မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံမှု။ သိပ်မရင်းနှီးသောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရန်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ပါသလား။ ဒီမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့စမ်းသပ်မှုပါ။
နောက်ဆုံးတော့ပေးဖို့အကြှနျုပျ၏တွန်းအား Karezza ငါ့ရည်းစားနှင့်ရိုက်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်၏နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ကို ၆ ရက်အတွင်းအော်ဂဇင် ၁၁ လုံးရှိခဲ့တာ၊ ငါအိပ်မနေခဲ့ဘူး ငါ sorta ပင်ပန်း, လှုံ့ဆျော, blah ခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအပေါ်ကျွန်ုပ်၏သဘောထားသည်လုံးဝလျစ်လျူရှုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီညညငါတို့ရိုက်လိုက်တယ်။ ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီးသူမကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအတွက်စိတ်သက်သာမှုရခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့နှေးကွေးသွား, ရာထူးအမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့နှင့်အလွန်စိတ်အေးလက်အေးနှင့်ကာမဂုဏ်လမ်းအတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါအော်ဂဇင်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါခံစားခဲ့ရတဲ့“ ဇုန်” ကိုငါဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်အံ့အားသင့်မိတယ်။ ငါ sorta သူ့အဘို့ဤသည်တကယ်ပြင်းထန်သောလိုအပ်ချက်ကနေနောက်ကျောနှင့်ထွက်သွား။ , ပြီးတော့အာရုံခံစားပျော်မွေ့သို့ပြန်ဆင်းအခြေချ။ ငါနာရီကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တစ်နာရီနီးပါးလုပ်နေခဲ့ကြရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တကယ်အံ့သြသွားတယ်။
ချက်ချင်းပဲငါတို့သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူညစာစားဖို့သွားတယ်။ လမ်းပေါ်ကကားထဲမှာကျွန်မတို့ဟာအရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍“ WOW” ခံစားနေရသည်။ ညစာစားချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်“ ကျွန်ုပ်၏ဂိမ်းတွင်” ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်နဲ့လူမှုရေးအဆင်မပြေမှုတွေဟာအရမ်းနည်းနေတယ်။ ငါယုံကြည်မှုခံစားရတယ် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမအိမ်ကိုပြန်မသွားမီနောက်ထပ်မိနစ် ၃၀ လောက်နေခဲ့ရသည်။ ငါသူ့ကို "ပြသခဲ့သည်အော်ဂဇင် v ။ စွမ်းဆောင်ရည်"ဗီဒီယိုနှင့်သူမအလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
သာ. ကြီးမြတ်ညီညွတ်မှုနှင့်သာယာဝပြောရေးတို့အတွက်ဒီစာရွက်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့ နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ တကယ်ရေရှည်လိင်ဤရှေးဟောင်းချဉ်းကပ်ဆက်ဆံရေးရေရှည်အတွက်ယောက်ျားပျြောရှငျနှင့်ပိုပြီးလိင်ကျေနပ်မှုစေရှင်းပြဖို့ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ဖက် bonds အဘယ်သို့သောအကြောင်းမကြာမီကသုတေသန။